YAY TAHAY IN AY LA HADLAAN DAWLAD-GOBOLEEDDADA ITOOBIYA? • Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News | Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News
AHUN madaxweyne, MICigaal wuxuu abaabulay wefti siyaasiyiin iyo khubaro millateri ah, waftigaa wuxuu madax uga dhigay AHUN Col. Xuseen Axmed Guuleed (Xuseen-dheere). Intii aanu ku biirin SNM, oo uu wax weyn ku kordhiyay, Col. Xuseen Axmed Guuleed (xuseen-dheere) wuxuu ahaa Taliye-gaas ciidammadii ex-Xooggii Dalkii Soomaaliya la isku odhan jiray, oo ku wajahnaa jiidaha ugu adag ee ciidamada Itoobiya, gobolka Sidaamo. Aqoonttisa sare, geesinnimadiisa, iyo dagaal-gelinttisii heerka sare ahayd aawadeed ayuu MICigaal ku doortay Col. Xuseen-dheere, oo ay sir-doonka Itoobiyaankuna ka dhereg-sanaayeen, xogtiisa. Waftigaasi, wuxuu Herer iyo Adisaba ku maqnaa muddo toddobaad ka badan. Markii ay soo noqdeen, oo ay arrintiina heshiis iyo is-af-garad ku dhammeeyeen, AHUN Col. Xuseen-dheere, wuxuu rag dhawr iyo toban ahaa, oo aan ka mid ahaa shir ugu qabtay gurigii uu ka degganaa Burco, xaafadda shacabka, xafiiska hadda ee SOYDAVO. Wixii ay ku wada hadleen oo dhan, iyo in markii dambe uu ku yidhi Col. Xuseen-dheere, qoladii Itoobiyaanka ee jananada ahayd “haddii aad soo weerartaan Yiroowe iyo Boorame, marka hore in aad maato laynaysaan. Ugu badnaan, bil ka dibna hal nin oo ciidan ah, oo Itoobiyaan ahi aanu ka sokayn doonin Herer” ayuu odaygu noo sheegay.
Arrinta xiisaha lahayd, ee AHUN Col. Xuseen-dheere noo sheegay waxay ahayd “Waxay na tuseen laba sawir oo dhamaystiran, oo mid walba magaciisu ku qoran yahay. Sheekh Cali Warsame, iyo Sheekh Dayib, oo aanan anigu garanayn, oo ay ku doodayaan in ay nagaga soo abaabulaan dagaal iyo argagixiso, labadaa magaalo”. ayuu yidhi Col-Xuseen dheere ” Waa macallimiin-quraan baan ku idhi. Mana jiraan wax colaad ah oo ay idiinku maqan yihiin” ayaan ku idhi ayuu yidhi. Janankii madaxda u ahaa weftiga Itoobiyaanka, oo nin dhallin-yaro ah, ayaa igu yidhi, “Ma noo damaanad-qaadaysaa in aanay nimankaasi dagaal iyo colaad nagu soo abaabulin” Col. Xuseen dheere, wuxuu yidhi da’yaraantiisa waan arkayaye, inuu khibrad zero ka yahay ayaan gartay “Haa, anaa idiin damaanad-qaadaya, ayaan ku idhi”, ayuu noo sheegay AHUN Col. Xuseen-dheere